KITRA – «UEFA CHAMPIONS LEAGUE» :: Nahazo tany malemy ny Real Madrid, sendra ny henjana ny Liverpool • AoRaha
KITRA – «UEFA CHAMPIONS LEAGUE» Nahazo tany malemy ny Real Madrid, sendra ny henjana ny Liverpool
Nifanohitra tanteraka ny herijika ho an’ny tompondakan’i Eoropa farany sy ny lefiny, taorian’ny antsapaka ho an’ny dingan’ny ampahavalon-dalana ho an’ny “Uefa champions league”, taranja baolina kitra.
Omaly tany Nyon, Soisa, no nahafantarana ireo lalao valo hanamarika an’ity dingana ity. Hifandona amin’ny Bayern Munich, tompondakan’i Alemana imbe­tsaka nisesy, ny ekipan’ny Liverpool, an-dry Mohamed Salah sy Sadio Mané eo amin’ny dingana manaraka. Hampiantrano ny lalao mandroso amin’ny volana febroary i Alemana, raha any Londres kosa no hanaovana ny lalao miverina amin’ny volana marsa.
Maivamaivana kosa ny lalana ho an’ny Real Madrid, izay tompondakan’i Eoropa farany. Ny ekipan’ny Ajax Amsterdam no hifanandrina amin’izy ireo. Talohan’ny taona 1996 no niatrika lalao famaranana inenina ity farany ka inefatra (1971, 1972, 1973, 1995) no nahazo ny anaram-boninahitra. Inenina ambin’ny folo kosa no niatrika ny lalao famara­nana ny Real ary inefatra ambin’ny folo tamin’ireo no tompondaka (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ary 2018).
Isan’ireo lalao goavana, andrasana ihany koa, ny fifanandrinana eo amin’i Atletico Madrid sy ny Juventus. Samy ekipa manana ny lazany eo amin’ny fiarovan-tena izy ireo. Tsy azo amba­niana kosa ny mpifaninana amin’i FC Barcelone sy ny Paris Saint-Gérmain amin’ ity lalao ampahavalon-dalana ity. Ny Olympique Lyonnais sy ny Manchester United no hifanandrina amin’izy ireo amin’izany.
Hifanandrina amin’ny Schalke 04 ihany koa ny Manchester City. Lalao somary tsy dia mahasarika saingy mety hiady kosa ny lalaon’ny AS Rome sy ny FC Porto.
FIKENDRENA FITONIANA SY FAHAMARINANA :: Miantso an’ireo kandidà hanaiky ny voka-pifidianana ireo Eveka katôlika